Madaxweynaha Soomaaliya oo Dhambaal ka guddoomay Ra’iisul wasaare ku xigeenka Jordan “SAWIRRO” | Baydhabo Online
Madaxweynaha Soomaaliya oo Dhambaal ka guddoomay Ra’iisul wasaare ku xigeenka Jordan “SAWIRRO”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa dhambaal ka guddoomay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Jordan, kaas oo uu ka siday boqorka dalka Jordan.
Dhambaalkaan waxaa laga siday boqorka dalka Joran Cabdalla A-thani Ibnu Xuseen, waxaana uu soo wakiishay Ra’iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka Maalgashiga dalkaasi Dr Jawaad Al-anaani oo yimid magaalada Muqdisho, Villa Somalia, ayaa lagu soo dhoweeyey Wefdiga uu hoggaaminayey.
Madaxweynaha J. Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaalkaasi ka guddoomay Dr Jawaad Al-anaani, waxa uu uga warbixiyey sida boqortooyada Jordan ay u daneyneyso xoojinta iyo iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay, sidoo kale waxa uu ammaanay doorashooyinka Soomaaliya ka socda oo uu ku tilmaamay ham cusub oo loogu gudbi karo nidaam Dimuqoraadiyaddeed oo buuxa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa uga mahadceliyey boqorka dalka Jordan dhambaalka uu u soo diray, waxa uu sheegay in labada dal ay yihiin walaalo taariikh ay ka dhaxeyso, sidoo kale waxa uu xusay madaxweynuhu in la joogo waqtigii uu bilaaban lahaa dedaalka Jordan ay uga qeyb-qaadaneyso horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca maashaariicda wax soo-saarka iyo adeegyada kale.
Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa salaan u diray boqorka Jordan, isla markaana ballan qaadey in dib loo hagaagin doono xiriirka tooska ah ee ka dhaxeeya labada dal, sida ugu dhaqsiyaha badan.